UApple unokumilisela i-iPad Pro "encinci" kwaye ahlaziye imodeli ye-12,9 "| Iindaba ze-iPhone
UApple unokuvula i-Pro Pro "encinci" kwaye ahlaziye imodeli ye-12,9 ″
UJose Alfocea | | iPad Pro, Ezahlukeneyo
Kwinyanga ephelileyo ka-Agasti, ingxelo ka-Ming Chi-Kuo odumileyo kunye nowaziwayo we-KGI Securities U-Apple wayecwangcisa ukumiliselwa kweemodeli ezintathu ze-iPad kunyaka ka-2017, Icebisa ngakumbi ukuba imodeli ye-9,7 could inokukhula kancinane ukuya kwii-intshi eziyi-10,5.
Ngoku upapasho lweMacotakara ngokuyinxalenye longeza kolu qikelelo, kuqinisekisa ukuba intwasahlobo ka-2017 izakubona ukumiliselwa kwe iimodeli ezintathu ezintsha ze iPad Pro. Nangona kunjalo, njengoko siza kubona, kunokubakho iindaba ezinomdla nezothusayo.
1 IPad Pro iya kuba ngumgangatho weepilisi zeApple
2 Kwaye ukumangaliswa: IPad Mini Pro?
2.1 Kwakhona i-12,9-intshi ye-iPad Pro iya kufumana uhlaziyo
IPad Pro iya kuba ngumgangatho weepilisi zeApple
Andazi ukuba ucinga ntoni kodwa ngokoluvo lwam, ngamanye amaxesha uphumelele ngakumbi kunabanye, I-Apple ingene kwingxaki enkulu nosapho lwe-iPad ekufuneka ilungisiwe. Kwaye esi sisombululo sokucwangciswa ngokutsha esinokuthi senziwe ngokuchanekileyo kunyaka wokuqala ka-2017.
Ndithetha ngeemeko ezinje nge-9,7-intshi ye-iPad Pro "iphantse" iyafana ne-Air 2, kodwa ixabisa i- € 250 ngaphezulu emva kokuphuculwa okumbalwa. OKANYE Imeko engenangqondo yokuba i-4GB ye-iPad Mini 32 kunye ne-2GB ye-iPad Air 32 zibiza ngokufanayo, € 429.
U-Agasti ophelileyo ovela kwi-KGI Securities sele befuna ukuba into izakutshintsha kusapho lwe-iPad kunyaka ka-2017. imodeli ye-9,7 could inokukhula iye kwii-intshi eziyi-10,5, Kwaye udale imodeli entsha yolu bungakanani eya kuhlala kunye nobukhulu bangoku.
Ewe ngoku iMacotakara nayo icebisa ukuba iApple iyaluhlaziya uluhlu lwe-iPad nangona ngeli xesha, ithetha ngokukodwa ngayo "Iimodeli ezintathu zePad Pro" eziza kukhutshwa ngentwasahlobo yonyaka olandelayo.
Njengengxelo yangaphambili ye-KGI Securities, uMakotakara uyayixhasa imbono ye iPad Pro ubungakanani bayo buya kuba bukhulu kancinci kunomgangatho wethebhulethi yeCupertino. Nangona kunjalo, uthi obu bungakanani buya kuba 10,1 intshi, Kwaye hayi i-intshi ye-10,5 njengoko i-KGI yayiphikisile. Obu bungakanani buya kufezekiswa ngokwandisa kancinci imilinganiselo yangaphandle yesixhobo ngeesentimitha enye ubude nesiqingatha sesentimitha ngaphezulu kububanzi.
Kwaye ukumangaliswa: IPad Mini Pro?
Uninzi lwabahlalutyi kunye nabasebenzisi abaninzi bayazibuza ukuba ingaba i-iPad Mini iyavakala na namhlanje xa abantu abaninzi bengasayikhethi ngenxa yesayizi enkulu yesikrini se-iPhone, ngakumbi iimodeli zokudibanisa. Ke, Ngaba iApple iya kuqhubeka nokuphuhlisa umgca we-iPad Mini? Ingxelo kaMakotakara ayibonisi kuphela ukuba, eneneni, kuya kuba njalo, kodwa ikwanjalo Imodeli entsha ye-iPad Mini iya kuphatha ifani "Pro".
I-iPad Mini 4 iya kuhlaziywa njengePad Pro (7,9-intshi), uya kufumana iSinxibelelanisi seSmart, kunye notshintsho kwinkcazo yezithethi ezi-4 eziviwayo. Kwaye ikhamera ye-pixel iSight ye-12 yezigidi, i-True Tone flash kunye ne-True Tone display.
Nangona ingxelo kaMakakakara ingabonakalisi kwanto malunga noku, kuya kucingelwa ukuba ukuba loo ntelekelelo ye-iPad Mini Pro ekugqibeleni iyakubona ukukhanya kubandakanya iSinxibelelanisi seSmart okanye "isinxibelelanisi esihlakaniphile", i-10,1-intshi ye-iPad Pro inokubandakanya eli nqaku njengoko ibingayi kuthetha ukuba kwakungekho njalo.
Ngakolunye uhlangothi, Imodeli entsha yekhibhodi ye-Smart nayo iya kuvela ubungakanani bayo obuza kulungelelaniswa nemilinganiselo "emincinci" yaloo 7,9-intshi iPad Pro.
Ingxelo ikwacebisa ukuba zontathu iimodeli ezintsha zePad Pro ziya kuhlaziywa ngeemakrofoni ezine.
Kwakhona i-12,9-intshi ye-iPad Pro iya kufumana uhlaziyo
Ekugqibeleni, I-12,9-intshi iPad Pro iya kuphuculwa ibe yikhamera ye-12MP kunye neTone yeNyaniso yeTone Imodeli yangoku ye-9,7-intshi, kunye Ukuboniswa kwethoni yokwenyani kananjalo.
I-KGI ikwacebise ngexabiso eliphantsi i-9,7-intshi ye-iPad, into engachazwanga ngeli xesha kwaye, kuzo zonke iiakhawunti, kubonakala ngathi ayinakulindeleka.
Kwelinye icala, ucinga ukuba iApple irhoxile kwisinxibelelanisi sejackphone ngokufika kwe iPhone 7Umntu uyazibuza ukuba ngaba uneemodeli ezintsha ze-iPad, ayizukulandela le ndlela.Umbuzo wokugqibela uphathelene neqhosha lasekhaya: ngaba iqhosha lokukhangela liza kuhlala okanye iqhosha elitsha liza kubakho kwisizukulwane esitsha se-iPhone?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPad » iPad Pro » UApple unokuvula i-Pro Pro "encinci" kwaye ahlaziye imodeli ye-12,9 ″
Kuqhuma i-iPhone 6 Plus epokothweni yomfundi
Guqula imvelaphi ye-iPhone 7 yakho ukuze ubone izixhobo zekhompyutha ngaphakathi